आज मिति २०७७ साल चैत २४ गते मंगलबार , अप्रिल ६, तपाँईको आजको दिन कस्तो हुनेछ ?
मंगलवार, २४ चैत्र २०७७, सगरमाथा पोष्ट.
काठमाण्डौं । आज मिति २०७७ साल चेैत २४ गते मंगलबार , । तदनुसार अप्रिल ६ तारीख ।
दिगो फाइदा हुने योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। तारिफयोग्य कामले लोकप्रियता दिलाउनेछ। निर्णय कार्यान्वयमा केहि बाधा खडा हुनाले आत्मबलमा कमी आउनेछ । सामाजिक दायित्व पनि बढ्नेछ। मनमा दुविधा उत्पन्न हुनेछ । स्वास्थ्य विग्रन सक्छ, सचेत रहनु होला ।
आज आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्त्व जमाउन सकिनेछ । तर केहि महत्वपुर्ण उपलब्धिका लागि केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । स्वास्थ्य कमजोर रहनाले लक्ष्यमा पुग्न समस्या पर्नेछ। रोकिएका काममा दोहोरÞ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला।
नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । तपाँईको कामका लागि सहयोगीहरू समेत भेटिनेछन्। आज नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । सामाजिक कृत्यमा सहभागी बन्नु पर्नेछ । आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । व्यापार सामान्य भए पनि आम्दानी बढ्नेछ। कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ।
प्रयत्न गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। परिश्रम परे पनि मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। अवसरले पछ्याए पनि फाइदा उठाउन चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ। अवसरले पछ्याए पनि फाइदा उठाउन चुनौतीहरूसँग जुध्नुपर्नेछ।
शुभचिन्तकहरूको सहयोगले लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ। पारिवारिक साथ सहयोगले उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ । विपरित वर्गबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । समस्या पन्छाएर अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्।
पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आज रोकिएका र अधूरा कार्य पुनः सुरु हुन सक्छन् । जोश,जाँगर र उमङ्ग बढ्नेछ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ ।केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। तापनि, मान्यजनको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोला।
परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन नसक्दा काम बिग्रन सक्छ।
कामको चाप बढे पनि प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सफल भइनेछ । आज प्रेमीको सहयोग पाईनेछ । नजिकको आफन्त र मित्रसँग प्रविधि मार्फत भेटघाट हुनेछ । अवसर र व्यवधानका बीचबाट कर्मयोग अघि बढ्नेछ। लगनशीलताले परिस्थिति सहज बनाउन सकिनेछ। सहयोगीहरू पछि हट्नाले चिताएको काममा बाधा पुग्नेछ।
भविष्यमा फाइदा हुने काममा सम्झौता हुन सक्छ। मिहिनेतले आम्दानी बढाउन सकिनेछ । आज अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । दैनिक कार्यहरू विस्तारै सहज हुनेछ । पहिलेको उपलब्धिले उत्साह जगाउनेछ। तर, केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ।
शुभचिन्तकहरूको साथ र सहयोग जुटने छ । परिस्थीति अनुकुलका विभिन्न अवसर पनि आउनेछन्। आज मन भावुक र उत्ताउलो बन्नेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। अनावश्यक ठाउँमा धन खर्च हुनसक्छ । नजिकका व्यक्तिबाट गरेको कार्यमा वाधा आइपर्ला । पहिलेको सफलताले महत्त्वाकांक्षा बढाउनेछ। परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्दा पछि परिनेछ।
आज को दिन कसैको करकापमा परी काम वा विशेष निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। आज एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । बन्धु बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । राजनैतिक कार्यमा विशेष सफलता मिल्नेछ ।आकस्मिक कामले खर्च बढाउन सक्छ। सञ्चित रकम अरूलाई सरसापट दिनुपर्ने हुन सक्छ। परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला।
दिगो फाइदा हुने काम हातलागी हुनेछ। श्रमको उचित मूल्य प्राप्त हुनेछ। आज शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । आदर्श ब्यक्तिको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ ।अवसर पाइनेछ र मिहिनेतले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। श्रमको उचित मूल्यांकन होला। पढाइमा प्रगति हुनेछ।
आजको मिहिनेतले पछिलाई फाइदा हुनेछ। लाभ,हानी,आय,व्यय,सुख,दुख वरावरी खालको समय छ । धार्मिक कार्यमा विशेष बढ्ने र सामाजिक पदप्रतिष्ठा प्राप्त हुने देखिन्छ । नियमित काम सम्पादन भए पनि निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न होला। बेसुरमा काम गर्दा समस्या पर्नेछ। तापनि, बुद्धिको उपयोगले काम सम्पादन हुनेछ। श्रम परे पनि कामको जग बसाउने मौका छ।